Ndị na-eri ọgwụ, bandeeji na mpempe akwụkwọ, bandeeji ọgwụ - ASN
Anti-coronavirus (COVID-19) Ahụike & Disp ...
Disposable Nwepu Uwe na nchekwa uwe ...
Huaian ASN Medical Technology Co., Ltd. bụ ihe ọhụrụ enterprise tụnyere R&D, imewe na mmepụta. Nwere ikike nke iri na ise ma kwupụta ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. O nwere asambodo sistemụ ISO 13485, asambodo EU CE, asambodo US FDA, ma sonye n'ọtụtụ nnukwu ahịa azụmaahịa kwa afọ. Ọ na - ewepụta ngwaahịa dị iche iche dịka bandeeji ahụike ọhụrụ, bandeeji nrụzi, na bandeeji eji echebe mmanụ.
can nwere ike ịkpọtụrụ anyị ebe a!